အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ပြသခဲ့ပြီး တူရကီကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ အီတလီ – Sports A2Z
အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ပြသခဲ့ပြီး တူရကီကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ အီတလီ
အီတလီအသင်းအနေနဲ့ ၄-၃-၃ ပုံစံနဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင် ခေးလီနီကို ဂျူဗင်တပ်စ်အတွဲ ဘိုနူချီနဲ့ တွဲဖက်ပေးခဲ့သလို ကွင်းလယ်မှာတော့ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေ မနာလိုစရာ အတွဲအဖက်ဖြစ်တဲ့ ဂျော်ဂျင်ညို၊ ဘာရဲလား၊ လိုကာတယ်လီတို့ကို အထိုင်ချခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှာတော့ အင်မိုဘီလီကို အင်ဆီညာနဲ့ ဘယ်ရာဒီတို့ ရံပြီး မိုးပြာမဟုတ်တဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုယွန်ကျူးနဲ့ ဒီမီရယ်လ်တို့ အတွဲအဖက်ကတော့ တူရကီတို့ကို ထင်သလောက် မမာကျောစေသလို မကြာခဏ ကန်ခွင့်တွေ ပေးနေခဲ့ရပြီး ပွဲချိန် ၁၇ မိနစ်မှာ စပင်နက်ဇိုလာရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကို ချယ်လိခ် လက်ထိခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်လူကြီးက သက်ညှာသွားခဲ့သလို မကြာခင်မှာပဲ အင်ဆီညာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကန်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ချိန်သားမကိုက်ခဲ့လို့ ဘေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၂၁ မိနစ်မှာ ဆိုယွန်ကျူ လက်ထပ်ထိတာကို VAR ပြန်ကြည့်ပြီးမှ ပင်နယ်တီပေးဖို့ ငြင်းသွားခဲ့ပြီး ဒီကနေရတဲ့ ထောင့်ကန်ဘောကို ခေးလီနီ ခေါင်းတိုက်ရာမှာလည်း ဂိုးသမား ချာကီယာ ပုတ်ထုတ်သွားနိုင်ခဲ့သလို တူရကီရဲ့ ဂိုးဧရိယာထဲအထိ ထိုင်ထားတဲ့ ခံစစ်ကို အီတလီတို့ အားနည်းတဲ့ ကန်ချက်တွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် မထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့လို့ ပထမပိုင်းမှာ ဂိုးမရှိသရေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းအစမှာတော့ တူရကီဘက်က ဆန်ဂျစ် အွန်ဒါက လီလီကစားသမား ယာဇီချီနေရာ ဝင်ကစားခဲ့သလို အီတလီဘက်ကတော့ လုံးဝ သေသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ညာတောင်ပံတိုက်စစ်အတွက် နောက်ခံလူ ဖလော်ရန်ဇီနေရာမှာ ဒီလော်ရန်ဇိုကို လူစားပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၅၃ မိနစ်မှာတော့ အီတလီတို့ အဖွင့်ဂိုး စတင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်က ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ညာခြမ်းမှာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရသွားတဲ့ ဘယ်ရာဒီက တူရကီဘယ်နောက်ခံလူ မီရာ့ရှ်ကို ကျော်ပြီး အင်မိုဘီလီဆီ ဖြတ်တင်ပေးရာမှာ ကြားထဲက ဝင်တားဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ် နောက်ခံလူ ဒီမီရယ်လ်နဲ့ထိပြီး ဂိုးထဲဝင်သွားခဲ့လို့ ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ အဖွင့်ဂိုးက Own Goal ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
တူရကီတို့ရဲ့ ပိတ်ကစားနေတဲ့ ခံစစ် စတင်ပြိုကွဲခဲ့အပြီးမှာတော့ အီတလီတို့ ဆက်တိုက် ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၆၆ မိနစ်မှာတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်လို တိုက်စစ်မှာ လိုက်ပါကစားနေတဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ စပင်နက်ဇိုလာရဲ့ ကန်ချက်ကို ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်လို့ ပြန်ထွက်လာရာကနေ တိုက်စစ်မှူး အင်မိုဘီလီက ပိတ်သွင်းရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၇၉ မိနစ်မှာတော့ တူရကီဂိုးသမားရဲ့ လူပေးမှားတာကနေ ဘယ်ရာဒီ ပြန်ရသွားခဲ့ပြီး အလယ်ကို ပြန်ထည့်ပေးရာကနေ အင်မိုဘီလီက ဘယ်ခြမ်းကို ပြန်ထိုးပေးရာမှာ Curling Shot တွေ တစ်ပွဲလုံး လွဲချော်နေခဲ့တဲ့ အင်ဆီညာက ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ တိတိကျကျ အဝေးတိုင်ဘက်ကို ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ အီတလီတို့ တတိယဂိုးရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သုံးဂိုးရအပြီးမှာတော့ အီတလီတို့ တိုက်စစ်ကစားသမားသုံးယောက်စလုံးကို ခီယေဆာ၊ ဘာနာဒက်စ်ခီ၊ ဘယ်လော့တီတို့နဲ့ လူစားလဲ အနားပေးသွားခဲ့ပြီး ပွဲကို ထိန်းကစားသွားခဲ့သလို တူရကီတို့ကတော့ ဂိုးအစား ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုံး အဝါကတ်ကိုပဲ နောက်ခံလူ ဆိုယွန်ကျူးနဲ့ ရယူသွားခဲ့ပြီး နည်းပြ ဆီနိုးလ် ဂူးနက်စ်လက်ထဲမှာ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ပုံစံကိုပဲ ပြသနေခဲ့တာကြောင့် ကစားသမားကောင်းတွေနဲ့ အိမ်ပြန်ရမယ့်အသင်းလို့ ထင်ကြေးပေးစရာပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန်အပြည့်မှာတော့ နည်းပြ ရောဘတ်တို မန်ချီနီရဲ့ အဖြူရောင် အဇူရီတို့တို့ ယူရိုပြိုင်ပွဲအဖွင့်ကို လှပစွာနဲ့ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့သလို ဒီပွဲရလဒ်ကြောင့် အီတလီအသင်းအနေနဲ့ အုပ်စု(A)မှာ ဝေးလ်စ်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်တို့ မကစားခင် သုံးမှတ်အပြည့်နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အီတလီအသင္းအေနနဲ႔ ၄-၃-၃ ပုံစံနဲ႔ ပြဲထြက္လာခဲ့ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေခးလီနီကို ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အတြဲ ဘိုႏူခ်ီနဲ႔ တြဲဖက္ေပးခဲ့သလို ကြင္းလယ္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းေတြ မနာလိုစရာ အတြဲအဖက္ျဖစ္တဲ့ ေဂ်ာ္ဂ်င္ညိဳ၊ ဘာရဲလား၊ လိုကာတယ္လီတို႔ကို အထိုင္ခ်ခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္မွာေတာ့ အင္မိုဘီလီကို အင္ဆီညာနဲ႔ ဘယ္ရာဒီတို႔ ရံၿပီး မိုးျပာမဟုတ္တဲ့ အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံနဲ႔ ပြဲထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
ဆိုယြန္က်ဴးနဲ႔ ဒီမီရယ္လ္တို႔ အတြဲအဖက္ကေတာ့ တူရကီတို႔ကို ထင္သေလာက္ မမာေက်ာေစသလို မၾကာခဏ ကန္ခြင့္ေတြ ေပးေနခဲ့ရၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၁၇ မိနစ္မွာ စပင္နက္ဇိုလာရဲ႕ ျဖတ္တင္ေဘာကို ခ်ယ္လိခ္ လက္ထိခဲ့ေပမယ့္ ဒိုင္လူႀကီးက သက္ညႇာသြားခဲ့သလို မၾကာခင္မွာပဲ အင္ဆီညာ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ကန္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ခ်ိန္သားမကိုက္ခဲ့လို႔ ေဘးထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၂၁ မိနစ္မွာ ဆိုယြန္က်ဴ လက္ထပ္ထိတာကို VAR ျပန္ၾကည့္ၿပီးမွ ပင္နယ္တီေပးဖို႔ ျငင္းသြားခဲ့ၿပီး ဒီကေနရတဲ့ ေထာင့္ကန္ေဘာကို ေခးလီနီ ေခါင္းတိုက္ရာမွာလည္း ဂိုးသမား ခ်ာကီယာ ပုတ္ထုတ္သြားႏိုင္ခဲ့သလို တူရကီရဲ႕ ဂိုးဧရိယာထဲအထိ ထိုင္ထားတဲ့ ခံစစ္ကို အီတလီတို႔ အားနည္းတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ပထမပိုင္းမွာ ဂိုးမရွိသေရျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းအစမွာေတာ့ တူရကီဘက္က ဆန္ဂ်စ္ အြန္ဒါက လီလီကစားသမား ယာဇီခ်ီေနရာ ဝင္ကစားခဲ့သလို အီတလီဘက္ကေတာ့ လုံးဝ ေသသေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ညာေတာင္ပံတိုက္စစ္အတြက္ ေနာက္ခံလူ ဖေလာ္ရန္ဇီေနရာမွာ ဒီေလာ္ရန္ဇိုကို လူစားေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၅၃ မိနစ္မွာေတာ့ အီတလီတို႔ အဖြင့္ဂိုး စတင္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကြင္းလယ္က ေပးလိုက္တဲ့ ေဘာလုံးကို ညာျခမ္းမွာ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ရသြားတဲ့ ဘယ္ရာဒီက တူရကီဘယ္ေနာက္ခံလူ မီရာ့ရွ္ကို ေက်ာ္ၿပီး အင္မိုဘီလီဆီ ျဖတ္တင္ေပးရာမွာ ၾကားထဲက ဝင္တားဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ေနာက္ခံလူ ဒီမီရယ္လ္နဲ႔ထိၿပီး ဂိုးထဲဝင္သြားခဲ့လို႔ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဖြင့္ဂိုးက Own Goal ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။
တူရကီတို႔ရဲ႕ ပိတ္ကစားေနတဲ့ ခံစစ္ စတင္ၿပိဳကြဲခဲ့အၿပီးမွာေတာ့ အီတလီတို႔ ဆက္တိုက္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၆၆ မိနစ္မွာေတာ့ ေတာင္ပံတိုက္စစ္မႉးတစ္ေယာက္လို တိုက္စစ္မွာ လိုက္ပါကစားေနတဲ့ ဘယ္ေနာက္ခံလူ စပင္နက္ဇိုလာရဲ႕ ကန္ခ်က္ကို ဂိုးသမား ပုတ္ထုတ္လို႔ ျပန္ထြက္လာရာကေန တိုက္စစ္မႉး အင္မိုဘီလီက ပိတ္သြင္းရယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၇၉ မိနစ္မွာေတာ့ တူရကီဂိုးသမားရဲ႕ လူေပးမွားတာကေန ဘယ္ရာဒီ ျပန္ရသြားခဲ့ၿပီး အလယ္ကို ျပန္ထည့္ေပးရာကေန အင္မိုဘီလီက ဘယ္ျခမ္းကို ျပန္ထိုးေပးရာမွာ Curling Shot ေတြ တစ္ပြဲလုံး လြဲေခ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ အင္ဆီညာက ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ တိတိက်က် အေဝးတိုင္ဘက္ကို ကန္သြင္းႏိုင္ခဲ့လို႔ အီတလီတို႔ တတိယဂိုးရယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
သုံးဂိုးရအၿပီးမွာေတာ့ အီတလီတို႔ တိုက္စစ္ကစားသမားသုံးေယာက္စလုံးကို ခီေယဆာ၊ ဘာနာဒက္စ္ခီ၊ ဘယ္ေလာ့တီတို႔နဲ႔ လူစားလဲ အနားေပးသြားခဲ့ၿပီး ပြဲကို ထိန္းကစားသြားခဲ့သလို တူရကီတို႔ကေတာ့ ဂိုးအစား ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပထမဆုံး အဝါကတ္ကိုပဲ ေနာက္ခံလူ ဆိုယြန္က်ဴးနဲ႔ ရယူသြားခဲ့ၿပီး နည္းျပ ဆီႏိုးလ္ ဂူးနက္စ္လက္ထဲမွာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ပုံစံကိုပဲ ျပသေနခဲ့တာေၾကာင့္ ကစားသမားေကာင္းေတြနဲ႔ အိမ္ျပန္ရမယ့္အသင္းလို႔ ထင္ေၾကးေပးစရာပဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္အျပည့္မွာေတာ့ နည္းျပ ေရာဘတ္တို မန္ခ်ီနီရဲ႕ အျဖဴေရာင္ အဇူရီတို႔တို႔ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲအဖြင့္ကို လွပစြာနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သလို ဒီပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ အီတလီအသင္းအေနနဲ႔ အုပ္စု(A)မွာ ေဝးလ္စ္နဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ မကစားခင္ သုံးမွတ္အျပည့္နဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။
ချန်ပီယံခြေစွမ်းကို ပြသခဲ့ပြီး ရုရှားကို အေးအေးဆေးဆေး အနိုင်ယူတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်
ယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးရင် ဘယ်သူတွေ နားကုန်ကြမလဲ? Supercomputer ရဲ့ ချန်ပီယံက ဘယ်သူလဲ?
ပဲလေ့စ်နဲ့ ဗီယာရာကို အဝေးကွင်းမှာ ချေမှုန်းခဲ့ပြီး...
စနေနေ့မှာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး ချဲလ်ဆီးကို...
ဆလိုဗေးနီးယားအသင်းငယ်လေးကို အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါနဲ့...
အဝေးကွင်းမှာ ရက်ပစ်ကို ဖြုတ်ပြီး အုပ်စုဗိုလ်နဲ့...
လီဂီယာကို အနိုင်ယူပြီး အုပ်စုတက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ...